tungsten-titanium Sputtering ပစ်မှတ်များကိုအလှည့်ကျနည်းလမ်းသစ်
Tungsten Titanium ပစ်မှတ်အမှုန့်သတ္ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပြုလုပ်သည်။ ပုံမှန် tungsten-titanium cemented carbide ပစ္စည်းများသည်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်ကြိတ်ခွဲနည်းလမ်းများဖြင့်စီမံနိုင်သည်။, tungsten-titanium ပစ်မှတ်များကိုပြုပြင်ခြင်းသည်မြို့ပတ်အဝိုင်းများ (သို့) ပုံသဏ္န်မမှန်သည့်ပုံသဏ္န်များကိုစီမံဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်, ကြိတ်သည့်နည်းလမ်းသည်ပုံသဏ္arန်များကို arcs သို့မဟုတ် tapers များဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်, tungsten-titanium ပစ်မှတ်ကိုလှည့်ခြင်းဖြင့်သာစီမံနိုင်သည်, အခြားတဖက်တွင်မူ, tungsten သည်အခန်းအပူချိန်တွင်ကြွပ်ဆတ်သည်, အမှုန့်ပုံစံ, မြင့်မားသောမာကျောမှုရှိသည်; သို့သော်ငြားလည်း, တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းတွင်မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုနှင့်မာကျောမှုမြင့်မားသည်, တိုက်တေနီယမ်သည်အမှုန့်ဖြစ်သည့်အခါ, tungsten တိုက်တေနီယမ်ပစ်မှတ်သည်အထက်ပါလက္ခဏာနှစ်ရပ်ကိုပေါင်းစပ်။ အထက်ပါအကြောင်းများသည် tungsten-tungsten-titanium ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများလှည့်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့၌ကြီးမားသောစက်ပစ္စည်းစွမ်းအားလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။, မှိုနှင့်ကိရိယာများသည်မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုနှင့်မာကျောမှုရှိသင့်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် tungsten-titanium ပစ်မှတ်ကိုအလှည့်ကျနည်းလမ်းသစ်တစ်ခုနှင့်မိတ်ဆက်သည်။.
ဤ tungsten-titanium ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၏အလှည့်အပြောင်းသည်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည်: tungsten-titanium ပစ်မှတ်ပစ္စည်းနှင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြား; tungsten-titanium ပစ်မှတ်ပစ္စည်းနှင့် backing plate ကို tungsten-titanium ပစ်မှတ်စုဝေးရန်ဖွဲ့စည်းသည်; ပထမဆုံး tool တစ်ခုသုံးပြီး tungsten-titanium ပစ်မှတ်ကို tungsten-titanium ပစ်မှတ်တပ်ဆင်ခြင်းတွင်ပထမဆုံးလှည့်ပါ, ပထမ tool ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းပါဝင်သောထောင့်သည် ၈၀ ဒီဂရီဖြစ်သည်; ပထမလှည့်ပြီးနောက်, tungsten-titanium ပစ်မှတ်ကိုတပ်ဆင်ထားသောနောက်ဘက်ပန်းကန်ကိုပြုပြင်သည်; tungsten-titanium ပစ်မှတ်တပ်ဆင်ခြင်း၏နောက်ပန်းကန်ကိုစီမံပြီးသည်, tungsten-titanium ပစ်မှတ်ကိုအလွတ်ဖွင့်ရန်ဒုတိယကိရိယာကိုသုံးသည်, ဒုတိယကိရိယာဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းထောင့်သည် ၃၅ ဒီဂရီဖြစ်သည်?55°။ နောက်ဆုံး tungsten-titanium ပစ်မှတ်ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးသည်ကောင်းမွန်ကြောင်းသေချာပါစေ, တစ်ချိန်တည်းမှာ, နည်းလမ်းသည်ထိရောက်မှုကိုနှေးကွေးစေပြီး tool ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်.
အကြို: Plansee သည် CIGS ဆဲလ်များ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန် MoNa sputtering ပစ်မှတ်များကိုလွှတ်တင်သည်
နောက်တစ်ခု: 2021 တရုတ် Titanium Valley အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိုက်တေနီယမ်စက်မှုကုန်စည်ပြပွဲစတင်ပါပြီ